Waa kee ciyaaryahanka ka tirsan Man City uu walaaca ka muujiyay Mourinho, kahor kulanka Manchester derby? – Gool FM
Waa kee ciyaaryahanka ka tirsan Man City uu walaaca ka muujiyay Mourinho, kahor kulanka Manchester derby?
(Manchester) 11 Nof 2018. Jose Mourinho ayaa amaanay weeraryahanka kooxda Manchester City ee Sergio Aguero, kahor kulanka caawa Manchester derby ay labada kooxood caawa ku wada ciyaari doonaan, mid ka mid ah ah kulamada 12-aad ee horyaalka Premier League.
Wargeyska “Manchester Evening News” ayaa wuxuu daabacay wareysi uu dhawaan bixiyay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho kahor kulanka Manchester derby, wuxuuna sheegay inuu ka baqanayo kaliya halista Agüero
“Waan ka baqayaa kaliya kulamada aan kahor imaano isaga, waxaan la dhacsanahay tayada wanaagsan uu heysto, laakiin waxaa jira waxyaaba yar yar ee ku saabsan qaab ciyaareedkiisa ee aanan anigu ku qancin”.
“Laakiin rikooradiisa ayaa ka hadlaya waxa uu isagu yahay iyo tirada goolasha uu dhaliyay, ulama jeedo kaliya goolashiisa hal xili ciyaareed, wuxuu u dhaliyaa goolal sida inuu ka ciyaarayo horyaalka La Liga ee dalka Spain”.
Kulankii ugu horeeyay Manchester derby ee Jose Mourinho, kaasoo dhacay bishii April 2017, ayuu Sergio Agüero sabab u noqday kaarka roosaha uu qaatay xidiga khadka dhexe Marouane Fellaini.
Jose Mourinho ayaana maalintaas sheegay in fal celintii uu sameeyay Agüero ay sabab u noqotay in garsoorka uu si dhaqsi ah u siiyo Fellaini kaarka roosaha.
Kahor kulanka Manchester derby Mino Raiola oo hadlay sida uu haatan yahay xiriirka u dhexeeya Pogba iyo Mourinho